China Silos orinasa orinasa sy mpanamboatra | Boselan
Ny loko coating: Azo ovaina ny loko
Ny matevina coating: 0.25 ~ 0.40mm
Ny ambaratonga PH: Fenitra PH: 3 ~ 11; PH manokana: 1 ~ 14
Hamafisina: 6.0 Mohs
Fanadinana Spark: > 1500V
Noho ny haingam-baravarankely vita amin'ny vy vy, ny fitahirizana dia tsy mora ny mifandraika amin'ny rivotra ivelany sy ny orana, izay mifanaraka amin'ny fitahirizana sy ny hamandoana ny fanoherana ny vokatra maina toy ny varimbazaha, mora apetraka sy vidiny mora. dia nampiasaina be amin'ny fitahirizana sy ny fampiharana ny indostrian'ny sakafo tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Taratasy Vatom-bokotra Titanium Alloy
B tank an'ny BSL dia manery ny fampiasana Titanium (Ti) manankarena Hot Rolling Carbon Steel sheet. Namboarina manokana izy io amin'ny fizotran'ny enameled. Avelao hanao fampisehoana ara-batana miavaka; manafoana izay lesoka trondro trondro. Ny firafitry ny vera superfine amin'ny sosona enameled dia manome ny vy vy amin'ny kalitao sy mateza tena ilaina.
Teknolojia Edge Enameled
Ny sisin'ny Boselan dia mifangaro amin'ny fitaovana vita amin'ny loko izay mba hialana amin'ny electrolysis metaly tsy mahasondriana, ny harafesina ary manalemy ny fatorana mifangaro.
Formula Enamel pensilihazo tokana
Boselan dia namolavola ny endrika enamel azy manokana izay mahatonga ny porcelain manjelanjelatra kokoa sy matevina ary milamina. Nisoroka ny pinhole sy ny trondro.
Fomba fanombohan-kaseraky ny vatosaka Enamel
Boky (m 3 )
Isan'ny takelaka total
Previous: Tank mahaleo tena
Manaraka: Tankina ao anaty kamiao
Silk fitehirizana marika
Silos vy ho an'ny fitahirizam-bokatra